Dzimwe AirPod dzinokwira mumoto muFlorida | Ndinobva mac
Mamwe maAirPod anokwira mumoto muFlorida
Nhau dzinosvika nhasi maererano neAirPods. Iwo maafoni asina waya asina waya kubva kuCompertino-based kambani akave nekugamuchirwa kukuru mumusika mugore rapfuura. Asi nhau dze mutongo wakatambudzwa zuro nemugari weFlorida, Inochengeta mainjiniya eSilicon Valley-akavakirwa pamucheto.
Sezvineiwo, Jason Colon, anoshandisa AirPods anogara kuFlorida, aishandisa mahedhifoni ake matsva achitamba mitambo panzvimbo yekurovedza muviri pavakangoerekana vatadza kushanda uye zvichinzi, sekureva kwenyaya yake, chiutsi chena chakatanga kubuda mune chimwe chazvo.
Sekureva kwaJason, akatya ndokusiya chishandiso pane mumwe wemuchina wekurovedza muviri iye achienda kunotsvaga rubatsiro. Pakadzoka, imwe yemahedhifoni yakawanikwa ichipisa uye yakaparadzwa zvachose. Uye saka akaudza imwe yevezvenhau yaidzokorora nhau, mune iyi nyaya chiteshi cheterevhizheni, Chiteshi 8:
Yakanga yatove seizvi. Yakanga yatobvutwa kare. Handina kuzviona zvichiitika, asi pandakasvikako, yakanga yatokangwa! "Muri kuona kukuvadza kwakaita marimi kune mumwe wavo."
Nehurombo, zvinoita sekunge pasina mumwe munhu aive mune yekurovedza muviri panguva iyoyo, saka zvinogona kutonyanya kuomarara kuti uone chaizvo zvakaitika. Chirevo ichi chichava chekutanga kutaura nezverudzi urwu rwechinetso paApple AirPods, uye Zvinotaridza kuti zvinogona kukonzerwa nemhosho mubhatiri yechigadzirwa.
Sezvatinoziva, zvimwe zvigadzirwa zvakasangana nematambudziko akafanana uye chikonzero muzviitiko zvakawanda kwave kuri kutadza kwebhatiri ravanokwira.
Apple parizvino iri kudzidza zvakaitika, uye ichatsvaga tsananguro yezvakaitika, kunyanya kudzivisa zviitiko zvemberi. Kunyange zvakadaro, kubva kukambani yekuCalifornia vanotumira meseji inosimbisa kuti ingori yega nyaya uye kuti chigadzirwa, icho chakatengeswa zvakanyanya, hachina kuzivisa matambudziko akafanana kumwe kunhu pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mamwe maAirPod anokwira mumoto muFlorida
Makumi nemaviri emakore kubva kuPod HiFi kuenda kuKushaPodhi